Qatar Airways neMonacair kudyidzana inopa seamless helikopta kufamba pakati peMonaco neNice
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Qatar Airways neMonacair kudyidzana inopa seamless helikopta kufamba pakati peMonaco neNice
Airlines • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Nhau Dzakanaka • Monaco Kupwanya Nhau • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Dai 31, 2017
Qatar Airways neMonacair vanofara kuzivisa kudyidzana kutsva pakati peimwe yendege dzinotungamira pasi rose neFrance Riviera's premium helikopta inoshanda, kutanga 4 Chikunguru.
Vatakuri veQatar Airways vanosvika muNice vari mubhodhi yendege ichangotangwa sevhisi kuNice ikozvino ichave nemukana wekubatana zvisina tsarukano paNice International Airport kuenda kuMonacair helikopta kuenda kuMonte Carlo. Saizvozvowo, vafambi vanofamba kubva kuMonaco kuenda kuNice neherikoputa vachakwanisa kubatana kuNice International Airport kusarudzo yenzvimbo dzinopfuura 150 paQatar Airways 'network yepasirese.
Uku kudyidzana kuchavimbisa vafambi vanoenda nekudzoka kubva kuMonte Carlo kunakidzwa nebasa rakatsetseka, rinoramba richienderera kubva kudzimba dzavo kusvika kwavanoenda kwekupedzisira, pamwe chete nekubhuka kamwe uye nzvimbo yekubatana
Qatar Airways Group Executive Executive, Akanakira VaAkbar Al Baker, vakati: "Uku kudyidzana kwakabatana neMonacair kunoenderana nekuvhurwa kwebasa redu rakananga kuNice, zvichibvumira vafambi kuenda nekudzoka kubva kuMonaco mumaminetsi matanhatu chete kubva kuNice International. Airport. Strategic kudyidzana, kunyangwe kusimudzira network yedu, kubatana kana zvigadzirwa, ramba uchiita basa rakakosha kuQatar Airways. Chibvumirano neMonacair chinoratidza kuzvipira kwedu kupa vatakuri vedu mikana yakanaka kwazvo yekufamba, uye ndine chivimbo chekuti kudyidzana uku kuchafadza vatakakwira. ”
"Tiri kufara zvikuru nekubatana kutsva uku pakati peMonacair neQatar Airways," akadaro Gilbert Schweitzer, Managing Director weMonacair. “Semamwe ese masevhisi akataurwa naMonacair, tinoda kupa vatakuri vedu zvakanakisa. H130 inopa chiitiko chakasiyana chekufamba chatiri kuda kugovana nevatengi veQatar Airways. ”
Kutanga musi wa 4 Chikunguru, Qatar Airways 'yakanangana nekashanu-yevhiki sevhisi kuenda nekubva kuNice ichashanda neBoing 787 Dreamliner, ichipa vanofamba kubva pasirese mukana kune inogara ichizivikanwa nzvimbo yevashanyi yeFrench Riviera.
Monacair neQatar Airways vanogovana zviyero zvakafanana, vachibatanidza mhando yepamusoro yezvikepe zvemazuva ano uye zvine hunyanzvi neakasarudzika vatengi.
Bhizinesi Kirasi mune Qatar Airways 'Boeing 787 Dreamliner inopa yose-aisle kabhini dhizaini, ine zvigaro zvakarongedzwa mune yakasarudzika dhayamondi chimiro kuti upe yakawanda wega nzvimbo. Zvigaro-zvakatsenhama-zvigaro uye zvinowanika nyore, ergonomic nzvimbo dzekushandira zvinogadzira nharaunda inobatsira kune zvese zororo uye kugadzirwa. Kuwedzera kune chiitiko kune yakasarudzika Bhizinesi Kirasi menyu ine yakasarudzika chikafu uye i-pane-yekuda sevhisi inopa yemhando yepamusoro uye freshest zvigadzirwa.
Qatar Airways 'Boeing 787 Dreamliner Economy Kirasi inopa vanofamba nenzvimbo yakawanda kupfuura nakare kose, ine yakazara makumi matatu masendimita enzvimbo yemunhu uye 30 masendimita zvigaro paki kupa nzvimbo yekutambanudza uye kuzorora.
Inboard Wi-Fi inogonesa vese vafambi kuti vagare vakabatana chero nguva, uye yekutanga-mbiri mbiri-skrini interface inoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kuwanda, zvichigonesa vatengi kutamba mutambo pane yavo ruoko-yakabata chishandiso ivo vachiona bhaisikopo pane yavo yega skrini , iyo inoratidzira inonzwisisika yekubata-skrini yekudzora unit.
Vapfuuri vachakwanisa kubhuka pawww.qatarairways.com kana kuburikidza newavo wekufambisa nzira yekufamba pakati iyo inosanganisira vese avo eQatar Airways kuenda nekudzoka kuNice uye neherikoputa yavo kuenda kuMonaco inoshandiswa neMonacair. Vatengi vanobhururuka paQatar Airways Boeing 787 Dreamliner vanonakidzwa neruzivo rwakaita senge imwe, uko tekinoroji yekubudirira inosangana nehunhu hwevanhu dhizaini yekupa yakaderera kabhini kumanikidza, yakavandudzwa mhando yemweya uye humidity hwakakwana, inoenderana nebasa rakapihwa nekambani yendege-kuhwina mubairo vashandi.